Sidee loo habeyn karaa aasaaska aasaasiga ah ee Microsoft Word?
Posted by Tranquillus | May 2, 2020 | Xafiiska
Shaqada ugu yar ee lagu sameeyo Ereyga waxay kugu qaadaneysaa seddex saacadood. Si aad u diyaariso dukumenti ama miis, waa inaan lagugu xisaabin. Adiga oo aan haysan diiwaangelin ama bixin wax, wax walba ayaa isbaddalaya wax ka yar saacad. Waxaad horay u qaadday talaabada koowaad. Midda ka kooban fahamka in ay tahay waqtigii aad naftaada u tababari lahayd. Aasaaska aasaasiga ah ee Microsoft Word ayaa ku jira farahaaga. Haddaba dib u fadhiiso oo daawo fiidiyaha aan si taxaddar leh u bixinayo.
Aasaaska aasaasiga ah ee lagu ogaanayo Microsoft Word: heerka 1
Si loo isticmaalo maalin kasta Eray si wax ku ool ah. Ugu yar ee ugu yar waa in qofku awood u yeesho inuu ku dhex helo barnaamijka is dhexgalka. Waxaad si otomaatig ah u noqon doontaa mid wax soo saar leh haddii aad ogtahay waxa aan ka hadlayno marka aan kahadalno xargaha. Haddii aad awood u yeelan karto inaad riixdo qaabka ama dib-u-fiirinta tab, iyadoo kuxiran xulashooyinka aad raadineysid! Sideed jeceshahay in asxaabtaada ama maamulahaagu ay si qumman u qaataan awoodaada aad ku diyaarin karto dukumentiyo fudud? Haddii aqoontaadu ku xaddidan tahay furitaanka iyo xidhitaanka feyl.
Si aad u bilowdo waa inaad wax barataa :
Sida loo abuuro ama loo xusho shax dukumenti oo keydso
Qaabee qoraalkaaga: geesinimo, xaraf, iswaafajin, rasaas iyo saamaynta kale ee soo bandhigida
Ka dib si aad u maamusho Laydhka: cinwaanada, jihada qoraalka ama bogga, xuduudaha, xuduudaha iyo xuduudaha
U dhaqaaq u dhexeeya tabyada iyada oo ku xidhan shaqada la qabanayo
Iyo inaad magacowdo oo keydiso faylkaaga markii aad dhammeysid.
Aasaaska aasaasiga ah ee lagu ogaanayo Microsoft Word: heerka 2
Markaad xasuusato dhamaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah si aadan u argagixin isla marka laguu sheego inaad Bilaabeyso Erey. Waxaad ubaahan kartaa inaad si dhakhso leh u dhaqaaqdo, hagaajiso tayada sawirka dukumiintigaaga. Gali sawirro ama isticmaal qaabab horey loo sii qeexay. Waxyaabo yar oo yar oo dheeraad ah oo aad xasuusato, waqti badan ayaad badbaadin doontaa. Adigoo si dhaqso leh u saxaya qoraalkaaga. Ka dib adiga oo dib u soo bandhigaya mawduucyada ku saabsan warar, qoraalada, ama miisaska laga yaabo inaad diyaarisid.
Si aad u dhamayso waa inaad barataa:
Gelinta walxaha caadiga ah, sawirada, sawirada ama miisaska jaantus
Ka dib isticmaal gaagaaban oo ah keyboard-ka si aad u sameysatid oo aad u dhejiso qoraalka
Ku sii wad raadinta iyo badalida ereyada
Sidoo kale dabcan, si aad u isticmaasho hubinta laf-dhabarka tooska ah
Ku sii wad beddelashada madax iyo foorar
Oo ku dhammaada adeegsiga qaababka iyo mowduucyada
Tababbarka ereyga aasaasiga ah muxuu ii keenayaa?
Nabadoon muhiim ah oo maskaxda ka dhiga inaad dareento inaad ku qanacsan tahay shaqadaada. Mar haddii aad ku shaqeyso Ereyga, kuwa adiga kugu wareegsan ayaa ku qaadi doona si ka duwan kuwii hore. Barashada softiweerida erey siinta waa qiimo muhiim ah. Kalabar dadka kula shaqeeya waxay ku adag tahay qalabyada xafiisyada. Hadana iyada oo la adeegsanayo wax yar iyo dulqaad, qofkasta wuxuu ku farxi karaa asxaabtaada dukumentiyo tayo leh. Muuqaalka dukumiintiyadaada waxay ku siin doontaa sawirka aqoonyahan khibrad leh. Kaas oo aad ugafiican in lagu gargaaro qof itaal daran oo aan xitaa garaneynin sida loo isticmaalo keyboardkiisa.
READ Qalabyada ugu fiican ee internetka loogu talagalay turjumista qoraalka ama bogga
Sidee loo habeyn karaa aasaaska aasaasiga ah ee Microsoft Word? May 2, 2020Tranquillus
horeU dhig sanduuqaaga boostada sidii sanduuq muusig
socdaLiis dhammaystiran oo Furaha Furaha Keyboard-ka On Windows 10
Tababbarka animation dhaqdhaqaaqa ee PowerPoint
Liis dhammaystiran oo Furaha Furaha Keyboard-ka On Windows 10
Noqo qayb raadinta Google